Biotechnology ဆိုတဲ့ ဇီဝနည်းပညာဘာသာရပ်အကြောင်း သိပြီးပြီလား? – Live the Dream
Biotechnology ဆိုတဲ့ ဇီဝနည်းပညာဘာသာရပ်အကြောင်း သိပြီးပြီလား?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ချို့မှာသာ သင်ကြားတဲ့ Biotechnology ဘာသာရပ်ကို ကြားဖူးပေမယ့် Biotechnology ရဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သိသူနည်းပါးလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Live The Dream Media နဲ့အတူ Biotechnology ဘာသာရပ်အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်..
Biotechnology ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခြင်းအားဖြင့် သက်ရှိတွေရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်းများကိုသိရှိနိုင်သလို လူနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးပြုဇီဝနည်းပညာနဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Biotechnology ဆိုတာ
Biotechnology (ဇီဝနည်းပညာ) ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်က ဇီဝဗေဒ ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Biotechnology ဘာသာရပ်မှာတော့ သက်ရှိတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇများနဲ့ မျိုးရိုးဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ၊ protein, nucleic acid, or synthetic polymer စတဲ့ အက်တမ်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဆဲတွင်း မော်လီကျူးများရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ နဲ့ များစွာသော ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သက်ရှိတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇီဝဗေဒ ဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာအသုံးချပြီး လူနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို အထောက်အကူပေးမယ့် နည်းပညာများနဲ့ ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမားရေး၊ စွမ်းအင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စိုက်ပျိုးရေး စတဲ့ ကဏ္ဍ တွေမှာတော့ အထူးသဖြင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသုံးချဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဇီဝလောင်စာနဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအထောက်အကူပြု‌ဆေးဝါးများ၊ နည်းပညာများ တီထွင်လာနိုင်ခြင်းက biotechnology ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Biotechnology ဘာသာရပ်ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်အတွက် သာမက လူသားနဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို အကျိုးပြုနိုင်မှာ အမှန်ပါပဲ။
သက်ရှိတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေကို ရှာဖွေလေ့လာပေါင်းစပ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေမယ့် ရောဂါ‌များကို ကုသလာနိုင်ခြင်းတွေ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက် တိကျတဲ့ နည်းပညာများထွက်ပေါ်လာခြင်းတွေ ကြောင့် Biotechnology ဘာသာရပ်က ရောဂါဘယချိန်းခြောက်ခံနေရတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်‌ရေးမှာဆိုရင်လည်း ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကိုသာ မှီခိုအားထားရတဲ့အဖြစ်တွေ၊ ဓါတုဓါတ်ငွေ့တွေကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖန်လုံအိမ်စနစ် ပျက်ဆီးမှုတွေ၊ ထုတ်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်နဲ့ လေထုရေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ စတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး ဘေးထွက်ဆိုကျိုးများတဲ့ လောင်စာတွေကနေတစ်ဆင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်နည်းလှတဲ့ ဇီဝလောင်စာတွေကို အစားထိုးလာနိုင်ခြင်းက Biotechnology ဘာသာရပ် အရေးပါတယ်ဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်း စိုက်ပျိုးပင်များရဲ့ ပိုးမွှားခံနိုင်ရည်ကို မြင့်တင်ပေးနိုင် စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးများ၊ ထွက်နှုန်းတိုးပွားစေမယ့် သဘာဝဓါတ်မြေဩဇာများထုတ်လုပ်လာနိုင်ခြင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို စိုက်ပျိုးရေးအားထားရတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ Biotechnology ဘာသာရပ်က အ‌ရေးပါလှတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ Biotechnology ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲ ဆိုတာကို သိသွားကြပြီထင်ပါတယ်။
ရှေးအရင် က Biotechnology ဆိုတာ စိုက်ပျိုးပင်များကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူခြင်းစတဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာကိုသာရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်အတွင်း သက်ရှိတွေရဲ့ DNA တည်ဆောက်ပုံကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့နောက်မှာတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မှုခင်းရေးရာတော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေး၊ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတွေအထိ တွင်ကျယ် ထိရောက်လှတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Biotechnology ဘာသာရပ်ကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ ဆေးဝါးထုတ်ကုန်တွေ၊ နည်းပညာတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးဥပါဒ်ကို လျော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝဓါတုစွမ်းအင်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုသန့်စင်တဲ့စွမ်းအင်တွေကို ထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုမိုထိရောက်တဲံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့‌ကြောင့် Biotechnology ဘာသာရပ်က လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိလှတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်စနစ်တွေတိုးတက်လာခြင်းနဲ့အတူ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ဒီအတွက် အဟာရပြည့်ဝတဲ့အသီးအနှံတွေ၊ အစားအသောက်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးတဲ့ စွမ်းအင်တွေ၊ လောင်စာတွေကို ပိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေနဲ့ အစွမ်းထက်ဆေးဝါးတွေကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့၊ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Biotechnology ဘာသာရပ်ကို ထိရောက်စွာလေ့လာဖို့လိုအပ်သလို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာလိုအပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုပညာရပ်‌တွေကို စိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုပညာရှင်တွေ ပေါ်ထွန်းဖို့ များစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနာဂတ်မှာ ပိုမိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ Bio technologist တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ရည်ရွယ်ရင်း Biotechnology ဘာသာရပ်အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းကို ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။